(Tafaverina izahay!) Translator Newsletter: Webinars, ny tsy mety adika sy ny sisa maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2019 3:22 GMT
Taorian'ny fiatoana kely, tafaverina izahay ary tsara kokoa noho ny teo aloha! Noho izany indray, dia tonga soa eto amin'ity fizarana Translator Newsletter amin'ity herinandro ity indray! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://www.ecpdwebinars.co.uk
Amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena, iray amin'ireo lafiny tena manan-danja indrindra amin'ny asantsika – na tiantsika izany na tsia – ny mivarotra ny tenantsika. Ny famolavolana ny tranokalantsika mba hahafantaran'ny olona ny zavatra rehetra azontsika atolotra dia afaka manampy hahazoana mpanjifa vaovao sy hampitombo ny fahafahantsika hivelatra. Ny eCPD dia manolotra seminera mahafinaritra antsoina hoe “Manoratra kopia ho an'ny tranonkalan'ny fiharianao -Writing Copy for your Business Website” ny 8 Novambra izay mifantoka manokana amin'ireo mpandika teny miezaka hianatra momba ny SEO ary hanatsara ny tranonkalan'izy ireo. Jereo izany ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo!
Manao zavatra betsaka ao amin'ny Twitter
Pikantsary nalaina avy amin'ny http://successfulfreelancetranslator.com/
Eo amin'ny andalana mitovy amin'ilay lahatsoratra teo aloha, niara-nametraka lisitra mahatalanjona iray mba hanararaotra ny kaontinao Twitter (na manangana kaonty raha mbola tsy manana ianao!) ny mpandika teny mahomby Mahaleotena mba hanaparitaka ny teny momba anao amin'ny maha-mpandika teny! Jereo ato izany ary aza adinoina ny mijery ny sisa amin'ireo fampianarana mahaliana ato ho an'ny mpandika teny!
Voambolana dimy tsy mety adika
Ny tsy mety adika dia iray amin'ireo zavatra tiako indrindra hisaintsainana. Tiako fa samy manana ny voambolany sy ny heviny manokana izay misy ao anatin'izany sehatra izany ny fiteny tsirairay, saingy amin'ny maha-mpandika teny, dia hitako ihany koa fa fanamby izany ary miezaka mamantatra ny fomba tsara indrindra hitondrana ireo voambolana ireo amin'ny fiteniko. Nanoratra boky iray manambatra ireo voambolana tsy misy dikan-teny miaraka amin'ny dikany ilay mpanoratra, Ella Frances Sanders, ary miverina ankehitriny ny Fandrindrana ny Voambolana teknika miaraka amin'ny lisitra misy voambolana dimy tsy mety adika izay hodinihantsika. Inona ny hevitrao? Azonao adika ve ireny?
Ny tontolo amin'ny alalan'ny mason'ny mpahay fiteny maro
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://nymag.com
Efa niresadresaka momba ny hevitry ny “tena -soi- self” samihafa miankina amin'ny fiteny izay ampiasainareo isika. (Fantatro fa manana toetra samihafa amin'ny teny Anglisy, Rosiana, ary Espaniôla aho!) Saingy raha misy fiantraikany amin'ny fomba fijerin'ny hafa anao ny miteny fiteny samihafa, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fijerinao an'izao tontolo izao ihany koa ve? Toa mihevitra izany ny Science of Us (Siansa momba Antsika)! Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe, “Toa samihafa izao tontolo izao rehefa miteny fiteny faharoa ianao“, dia mametraka fanontaniana mahavariana izy ireo: “Tsy mitovy amin'ny Ianao misy any an-kafa ve ny Ianao izay misy ao amin'ny toetry ny fiteny iray?”
Raha sambany mamaky ity gazety ianao ary te hiaraka amin'ny Global Voices, dia lazao bebe kokoa anay ato ny mombamomba anao!